android ဖုန်းများအတွက် Dictionary.com APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Dictionary.com
Dictionary.com APK ကို
Dictionary.com Android အတွက်ဦးဆောင်အခမဲ့ English အဘိဓါန် App ဖြစ်ပါတယ် - 2,000,000 အဓိပ္ပာယ်နှင့် synonym တွေဟာကျော်နှင့်အတူ။ အဆိုပါ #1 အခမဲ့အဘိဓါန် app ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်သောဝေါဟာရသင်ယူခြင်း, ပညာရေးများအတွက်နေရာလေးကိုဖြစ်ပြီး, ရောနှောအဆိုပါအဆင့်မြင့်စကားလုံးချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျောင်းသား။
အလွယ်တကူအော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် synonym တွေဟာရှာပါ။ သငျသညျအချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုအော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန်ရယူနိုင်သည် - သင်ကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုအပ်ပါဘူး။ Voice ကိုရှာဖွေရေးနဲ့ audio အသံထွက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
Dictionary.com နှင့် Thesaurus.com ထံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောရည်ညွှန်းအကြောင်းအရာအပြင်, ဒီ app ကိုသငျသညျမြျှောလငျ့ထားစေခြင်းငှါ, ထက်ပို features တွေလည်းပါဝင်သည်:
•နေ့၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို - သင့်ဝေါဟာရချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်
•အသံအသံထွက် - အင်္ဂလိပ်ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှအခြားစကားလုံး mispronounce
•အသံရှာဖွေမှု - အဆင်ပြေပါကစာလုံးပေါင်းရန်မလိုဘဲတစ်ဦးစကားလုံးရှာဖွေဖို့စကားပြောဖို့
•ဆောင်းပါးများ - ရိုင်းများတွင်ဘာသာစကား, သဒ္ဒါနှင့်စကားများအပေါ်ပျော်စရာအကြောင်းအရာများရာပေါင်းများစွာစူးစမ်း
•ဆလိုက်ရှိုး - ဘာသာစကားအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များလေ့လာသင်ယူ
•အကြိုက်ဆုံးစကားများနှင့်သမိုင်းကိုရှာပါ - သင်လေ့လာသင်ယူစကားတို့ကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်အနာဂတ်ကိုးကားစကားများကယ်တင်ဘယ်တော့မှ
•နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဇာစ်မြစ် - ကိုပင် strangest ဤစကားသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအင်္ဂလိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
•ဒေသခံ lookups - စကားသည်သင်အနီးရှိသို့မဟုတ်တည်နေရာအားဖြင့်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိသည်ရာတွေ့မြင်
•စာလုံးပေါင်းအကြံပြုချက်များ - စကားလုံးတစ်လုံးစာလုံးပေါင်းဘယ်လိုသေချာသည်မဟုတ်လော အဆိုပါ app ထဲမှာစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းကူညီကြမည်
•အဆင့်မြင့်သင်ယူသူရဲ့အဘိဓါန် - ESL, EFL နှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူများအတွက်အထူးအကြောင်းအရာ
ပို. ပင်လိုပါသလား? သင်တို့သည်ငါတို့၏ In-app ကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူသင့်ရဲ့ app ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
•ဆေးပညာ, သိပ္ပံနှင့် Rhymes အဘိဓာန်များ
10.22 ကို MB
မတ်လ 8, 2018 မှာ 6: 23 ညနေ